Yikuphi isikebhe esingcono ekhishini ongasikhetha?
Ikhaya / Umhlahlandlela Wompompi / Yikuphi isikebhe esingcono ekhishini ongasikhetha?
2020 / 07 / 30 UkwahlukanisaUmhlahlandlela Wompompi 4932
Ngokuthuthuka okusheshayo kwemboni yezenhlanzeko, okulindelwe nezidingo zabantu zompompi ziya ngokuya ziba phezulu, futhi izinga lepayipi lihlale livuselelwa minyaka yonke, okwanele ukukhombisa ukuncintisana okunamandla embonini yezempilo. Ezinye izinkampani zizodala umphumela womkhiqizo ohlukile ngokuzithuthukisa njalo nokuzithuthukisa. Ake sibheke amazinga akamuva ompompi akulo nyaka.
IHansgrohe futhi ingenye yemikhiqizo eyaziwayo, eyasungulwa ngo-1901 futhi inomlando omude weminyaka engaphezu kwe-100. Njengenkampani enkulu yamazwe amaningi, ayinamandla kuphela, kodwa futhi icacile futhi inobuchwepheshe obuqondile. Onke ompompi bahlomele izibambo ezahlukile ukuze bahambisane nokuthandwa nezidingo ezahlukahlukene.
IGao Yi iluhlobo olusindayo embonini enomlando omude wentuthuko futhi iyinkampani enkulu yamazwe amaningi. Ngenxa yekhwalithi enhle nobungcweti bemikhiqizo yayo, ithuthuke ngokushesha futhi imikhiqizo yayo ithengiselwa amazwe amaningi kanye nezifunda. UGaoyi akagcini ngokwenza ikhishi lisebenze kakhudlwana, kodwa futhi lihle futhi lidume kakhulu.
Isungulwe ngo-1990, i-JOMOO ingumkhiqizi ophelele wasekhishini nendawo yokugezela ohlanganisa ucwaningo nentuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nezinsizakalo, nezitolo ezingaphezu kuka-5,000 zokuphelela nezindawo zokuthengisa ezingama-200,000 emhlabeni jikelele.
I-Jumeirah ingumugqa ofanisa ukubaluleka okukhulu ekukhetheni kwezinto zokwakha, futhi wazi kahle ukushisa nokuqhathanisa kwezinto ezahlukene. Njalo ngonyaka, sithumela abaklami emakethe yamanye amazwe kanye, bese bethula izinsimbi ezisezingeni elifanele ezisezingeni eliphezulu ezivela kuwo wonke umhlaba ukukhombisa izici zomkhiqizo. Ukusetshenziswa okuqinile kobuchwepheshe bokusakaza base-Italy, ukudala ucezu olulodwa, ukuqinisekisa izikhathi ezingama-500,000 ngaphandle kokudonsa.
Amafutha kaKohler awagcini nje ngokubukeka, kodwa futhi ayatholakala ngezitayela ezahlukahlukene, ngesiqeshana ngasinye sakhiwe ngokucophelela kusuka ngezinto ezifanele ukuqinisekisa ukuqina.
Njengomkhiqizi wepayipi oqeqeshiwe, i-WOWOW isebenzisa izinto ezinhle kakhulu zokusetshenziswa ukukhiqiza amalabhulali ekhwalithi ephezulu. Inezitayela ezahlukahlukene, amanoveli nemiklamo yemfashini futhi ihambisana nendlela yemfashini. Ingeza ukuthinta kokuklama ekhaya. Singaqinisekisa insiza enhle kakhulu yokuthengisa nokuthenga ikhwalithi yekhwalithi ngentengo yefekthri enenzuzo kakhulu.
Edlule :: Sebenzisa Ukuqapha kwe-faucet Olandelayo: Izinhlobo ezahlukahlukene zama-faucets
2020 / 11 / 19 663
2020 / 11 / 19 635
2020 / 11 / 16 643
2020 / 11 / 16 683